မြန်မာ့အရေး: ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု လား အမေရိကန် နဲ့ အနောက်အုပ်စုများရဲ့ အကျိုး အတွက် ပေးတဲ့ဆုလား
လူမှန်ရင် မိမိ နိုင်ငံ အကျိုး ကို မိမိတတ်စွမ်းသမျှ ထမ်းရွက် ရမည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု လား အမေရိကန် နဲ့ အနောက်အုပ်စုများရဲ့ အကျိုး အတွက် ပေးတဲ့ဆုလား
အဲဖရက် နိုဘယ် ကို ၁၈၃၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ တွင် ဆွီဒင် နိုင်ငံ စတော့ခ်ဟုမ်း မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာ ၁၈၉၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ တွင် အီတလီ နိုင်ငံ စန်ရီမို မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။သူ၏ သေတမ်းစာ အရ ၁၉၀၁ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှု့ရေး ပညာရေးဆိုင်ရာများမှာ လူသားအကျိုးပြု သူများကို ရွေးချယ် ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
ယခု ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဆိုရင် ထိုဆု တွေကိုချီးမြှင့်ခဲ့တာဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၁၁ နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။အခြားသော ကဏဿဏများတွင် တရားမျှတ မှန်ကန် စွာ ချီးမြှင့်နေသည် ဟု ထင်မှတ်ရသော်လည်း နော်ဝေး နိုင်ငံနိုဘယ်ဆု
ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ မှ ချီးမြှင့် သော ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု မှာ မူ အမေရိကန် နှင့် အနောက်အုပ်စု များ ၏ အလို အတိုင်း ၎င်း တို့ အလို ရှိရာကို ရရှိရန် အတွက် အသုံးချနေသည် ကိုတွေ့ရှိနေရပါတယ်။
ဒါဟာ အဲဖရက် နိုဘယ် ကိုသာမက ကမဿဘာသူ ကမဿဘာသား အားလုံး ကို နားလည် ပါးရိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို စက်ဆုပ်ရွံရှာ ဖွယ်တွေ့မြင်နေရပါတယ်။အမေရိကန် အစိုးရ ဟာ ကမဿဘာကို ခြယ်လှယ်ချင်တိုင်း ခြယ်လှယ်နေတာကို ရပ်ဆိုင်း သင့်ပြီလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် မမှန်ကန်ဘူးဟု ထင်သလဲ ? ဟုတ်ပါတယ် ဒါမေးသင့်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့် ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြပါ့မယ်...
ဒါကတော့ နိုဘယ် ဆု စတင်ချီးမြှင့် ခဲ့တဲ့ ၁၉၀၁ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ရရှိခဲ့ သူများ စာရင်းပါ..
Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee, Tawakkul Karman
Carlos Filipe Ximenes Belo, José Ramos-Horta
Alva Myrdal, Alfonso García Robles
Seán MacBride, Eisaku Sato
Comité international de la Croix Rouge (International Committee of the Red Cross) , Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (League of Red Cross Societies)
Comité international de la Croix Rouge (International Committee of the Red Cross)
Office international Nansen pour les Réfugiés (Nansen International Office for Refugees)
No Nobel Prize was awarded this year. The 2011
1919prize money was allocated to the Special Fund of this prize section.
Henri La Fontaine2011
Intergovernmental Panel on Climate Change 2011
1919(IPCC) , Albert Arnold (Al) Gore Jr.
Auguste Marie François Beernaert, Paul Henri Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant, Baron de Constant de Rebecque
Élie Ducommun, Charles Albert Gobat
Jean Henry Dunant, Frédéric Passy
ထို အထဲ မှ ကျွန်တော် လက်လှမ်း မီသလောက် အနည်းငယ် တင်ပြပါ့မယ်။
စစ်အေးကာလမှာ Gorbachev ဟာ ဆိုဗီယက် ယူနီယံ ရဲ့ သမတဿတ ပါ။ ထိုစဉ် အခါက အမေရိကန် ထက် ဆိုဗီယက် ယူနီယံ ဟာ အားသာနေပါတယ်။ဒီ အတွက်ကြောင့်ပဲ အမေရိကန်အစိုးရဟာ အကွက် မြင်မြင် နဲ့ Gorbachev ကို ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ။ဒီ နိုဘယ်ဆုကြောင့်ပဲ နယ်မြေခွဲထွက်ခွင့် တောင်းတဲ့ အချိန်မှာ Gorbachev ဟာ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပဲ ခွဲထွက်ခွင့်ပေးခဲ့ ရတာပါ။ဆိုဗီယက် ယူနီယံကြီး ပြိုကွဲ ခဲ့ရတာပါ။ဒီ နိုဘယ်ဆုအတွက် မည်သူအကျိုးအမြတ်ရှိသွားသလဲ ဆိုတာသာကြည့်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဆိုရင်လည်း မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှ ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိပါပဲ။မည်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ဆောင်မှု့မှ မရှိပါပဲ ။လူသားအကျိုး ထမ်းဆောင်မှု့ များမရှိပါပဲ အီယောင်ဝါး နဲ့ ရသွားတာပါပဲ။ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင် သူဟာ ၎င်း တို့ မျိုးနွယ်စု ဖြစ်တဲ့ အဂဿလန် နိုင်ငံသားတစ်ဦး ၏ဇနီး ဖြစ်တာကြောင့် ၎င်း တို့ ပြောနိုင်ခွင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် ထဲမှာ ပါပါတယ်။ နောက်တချက် မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ အာရှ နိုင်ငံအများစု ရဲ့ အဓိကပင်လယ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ ကိုခြယ်လှယ် နိုင်ပြီ ဆို လျှင် အာရှ နိုင်ငံ အများစု အတွက် အကျပ်အတည်း ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါပဲ ။ ထို့ အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် တင်မြှောက် နိုင်မည် ဆိုပါက ၎င်းတို့ လိုအင် ပြည့်ဝ မှာပါ။ဒီ့ထက်မကတဲ့ အကြောင်းတရား တွေလဲ အမြောက်အမြား ရှိနေဦးမှာပါ.။ လက်ရှိ အခြေ အနေမှာ သူတို့ လိုချင်သလိုဖြစ်မလာတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ပြကာ ထိကရုဏ်းများ ၊ ပြသနာများ မြောက်မြားစွာကို အနောက်ကနေ ကြိုးကိုင် စေခိုင်းနေတာပါ။
သူတို့ ကို အကျိုး ပြုနိုင်မည့် သူကို လက်တလော ရှာမတွေ့တာကြောင့် မိမိကိုယ် ကို အရှက်မရှိ ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တောင် စစ်ပွဲ တွေ ဆင်နွှဲ နေဆဲပါ။ကိုယ်တိုင် ဆင်နွှဲနေသလို စစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာအောင် တွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်မှု့ များမှာလဲ ထိပ်တန်းပါပဲ။အင်မတန် ငြိမ်းချမ်းအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သူပါ။
အသက် ၅၄ နှစ် ဖြစ်တဲ့ သူဟာ တရုတ်အတိုက်အခံ စာရေးဆရာဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကျဉ်းကျခံနေရပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းလောက်တွင် ထိန်းသိမ်းခံရသည့်သူဟာ
နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဖွဲ့စည်းမထုတ်ပြန်ခင်လေးတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။
“Chater 08” လို့အမည်ရသည့် ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ စုရုံးပိုင်ခွင့်၊ ဖော်ပြနိုင်ခွင့် နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့် အကြောင်းကို သူက ရေးသာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ အစိုးရအကြည်ညှိုပျက်အောင် ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် ချခံခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကတော့ Liu Xiaobo ဟာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာအကျဉ်းသားဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ နိုဘယ်(လ်)ဆုကို ဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်ဆောင်နေခြင်းတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံ နိုဘယ်(လ်)ဆု ချီးမြင့်ရေး ကော်မတီကတော့ Liu Xiaobo ၏ ရေးသားချက်ထဲတွင် လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နီးစပ် သက်ဆိုင်နေတာတွေ ရှိနေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Torbjorn Jaglund ဟာ ဆုချီးမြင့်ရေး ကော်မတီ၏ ဥက္ကဌ ဖြစ်ပါတယ်။
Torbjorn Jaglund: “ တရုတ်နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးမှာ အင်းအားတောင့်တင်းလာတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ဖြစ်လာသလို နိုင်ငံရေးမှလည်း သြဇာတိကမ ကြီးမားလာနေပါတယ်။ အခုလို အင်အားကြီးလာတာနဲ့အမျှ အနောက်နိုင်ငံများရဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် စိုးရိမ်မှု့ များဟာလည်း ကြီးမားလာပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ၎င်းတို့၏ ရန်ဘက် တရုတ်အစိုးရအပေါ်
အဖျက်အမှောက် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေသူ တရုတ်နိုင်ငံ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း ကြံစည်နေသူ ကို
ငြိမ်းချမ်းရေး အားထုတ်မှု့ဟု ခေါင်းစဉ် တပ်ကာ နိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံ မှာ Liu Xiaobo ကိုလွတ်ပေးရေးအတွက် ဆနဿဒ ပြပွဲများ ဖြစ်ပွားကာ ဆူပူမှု့များ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာလဲ ထိုနည်းတူပါပဲ။ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ ရသူ ၃ ဦးစလုံးမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံနှင့် မတည့်သော နိုင်ငံများတွင် ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှားနေသူများ၊တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်
အားထုတ် ကြိုးပမ်းနေသူများဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ငြိမ်ချမ်းရေး နိုဘယ် ဆု
အတွက်စာရင်းပေးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဒေါ်စု ၏ အခြေအနေမှာ ၎င်းတို့ လိုလားသည်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့အတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိမည် ဟုယူဆသော ထိုအမျိုးသမီး ၃ ဦးကို ပူးတွဲ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါအကြောင်း အချက် များ အရ နောင်လာမည့် နှစ်များတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ဟု မခေါ်တွင်စေပဲ ဆူပူမှု့အရေး ၊ အနောက်နိုင်ငံများ အကျိုးစီးပွား အရေး နိုဘယ်ဆုဟုသာ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ် သင့်ကြောင်း အကြံပြုရင်း........................................................
Posted by မြန်မာ့အရေး at 5:09 AM
၂၀၁၉ ထိုငျးရှေးကောကျပှဲ - သိသငျ့တဲ့ အခကျြ ၅ ခကျြ
နှုတ်မိန့်ညွန်ကြားသည့် ကျူးကျော်မှုကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်း ဖားအံမြို့တွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပြောဆို﻿
သြော် လူ့ပြည်လောက၊ လူ့ဘဝကား
သို့ တပြီးသား၊ သင်သေသွားသော်
သင် ဖွားသောမြေ၊ သင်တို့မြေသည်
ဘယ်မှာလဲ လူကြီး လူကောင်း (ပေးစာ - ၃၂)
ကမ္ဘာကျော် မြန်မာ့လရွှင်တော် ဇာဂနာ အကြောင်းတစေ့ တစေ...
ဒေါ်ညု ဆာဒူး ကတုံးနှင့် ဦးသိန်းစိန်အကြောင်း တစေ့တေ...
၎င်း တို့ အကျိုးစီးပွား အတွက် ပြည်ဖျက်လုပ်ငန်းများ သာ...
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု လား အမေရိကန် နဲ့ အနောက်အုပ...
FX, Online slots, europacasino, Globe counter, online pokies
လူဖတ်များသော post များ
အစိုးရက လမ်းအသစ်တွေဖောက် တံတားအသစ်တွေဆောက် ပြီး နိုင်ငံတိုးတက်အောင်တော့ သူတို့တက်အားသလောက် ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အရင် ၁နှစ်လောက...
ရုရှားပြည်ကြီးမှာ ဆိုလို့ ဗီဒီယိုတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို မှန်စီရာရွှေအိမ် နန်းတော်ကြီးတွေလို မထင်လိုက်နဲ့နော်။ ကိုယ်...
အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့(သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ )၌ မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင် မှ လူပျက်(ပျက်စီးနေသောလူ) ဇာဂနာ့ ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်း...
ဒေါ်ညု ဆာဒူး ကတုံးနှင့် ဦးသိန်းစိန်အကြောင်း တစေ့တစောင်း
အပြောမဟုတ်အလုပ်ဖြင့်သက်သေပြကာ ဒေါ်လာစားတို့ ပါးစပ်ပေါက်အားတစ်ဆင့်ခြင်းပိတ်နေသော သမ္မတဦးသိန်းစိန် ယနေ့သည် မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၃၇၃)ခုနှစ် ...
Arakan နာမည်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်မူ ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်လာ
မင်းဆက်ခိုင် ------------ ရခိုင်အမျိုးသားပိုင် Arakan ဆိုသော ဝေါဟာရကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြုနေသော လူတစ်စုအား ကန့်ကွက် ရှုတ်ချပွဲ အခမ်းအနားမ...
လာရောက်လည်ပတ် ဖတ်ရှုသူအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ဤ စာမျက်နှာမှ စာများကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး မိမိတို့၏ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများသို့ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ကူးယူဖော်ပြ မျှဝေသုံးစွဲမည်ဆိုပါက ဤစာမျက်နှာ ၏ လိပ်စာအား ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးပါရန် လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။